Apple inowedzera masheya e2012 uye 2013 MacBook Pro mabhatiri | Ndinobva mac
Apple inowedzera stock ye2012 uye 2013 MacBook Pro mabhatiri
Kana iwe uine yako MacBook Pro kubva pakati pa2012 kana kutanga kwa2013, Apple inogona kunge yakanonoka kuchinja bhatiri reMacs aya.. Icho chikonzero chave chiri kushomeka kwemasheya emabhatiri eaya mamodheru. Kunyanya, yakanga isiri dambudziko rekushaikwa kwemabhatiri pachawo. Chikamu chakange chisiri mudura yaive gungano kumusoro, kwaibatanidzwa maMac mabhatiri, pamamita gumi nemashanu-inchi, iine retina inoratidzwa.
Ichi chidimbu chakagadzirwa nealuminium uye panguva imwe chete, inochengetera iyo keyboard, iyo trackpad uye ine masitsitsiti ekutsvaga makomputa masipika.
Bhatiri remidziyo iyi rakagadziriswa kune yekumusoro chikamu chekasi.. Kana tangoparadzanisa bhatiri kubva kune iyo kesi, isu taifanirwa kutsiva iyo yakachaya bhatiri pack mune imwe shanduko. Tichifunga nezvekushomeka kwenyaya iyi, Apple yakapa muripo, gadziriso yemahara. Sezvo stock yatsiviwa, ikozvino haitenderi iyi gratuity kubva Chipiri chapfuura.
Kana iwe uchida kutsiva bhatiri, Apple inobhadharisa $ 199 muUnited States. Iyi nhamba inowanzo fananidzwa mune dzimwe nyika uye nekudaro, mutengo wayo unenge wakakomberedza 200 euros muEurope.
Mhosva dzekutanga dzekunonoka mukuchinja kwebhatiri reMac idzi, kubva munaKurume 2017, pavakamira kupa bhatiri kutsiva. Kufanotaura kwekutanga kwekuve nezvinhu kwaive munaGunyana 2017, kuenda kuna Mbudzi. Kusvika pari zvino tanga tisina nhau nyowani, nevamwe mapato vanofarira kusarudza dzimwe mhinduro mukutarisana neApple passivity.
Zvisinei, Apple yakapa mhinduro kune vanofarira vatengi. Kutanga, Apple yakapa gadzirisa bhatiri remahara, nekukurumidza pandakava nesheya. Asi kana mutengi aisada kana kutadza kumirira, imwe mhinduro yaive yekusarudza yakaenzana modhi. Vamwe vatengi vakabatsirwa nekuchinjisa yavo 2012-2013 MacBook Pro ye2016 MacBook Pro, ine Kubata Bar, pamutengo we $ 199.
Asi iyi break break haina kuitika kumatunhu ese epasi. MuSpain tine humbowo hwemuverengi waSoy de Mac uyo aiti akaita bvunzo uye, vangave vaive neyakare, kana ivo vakanzwisisa kuti bhatiri harina kunyanyo kushata, iyo chete chinodiwa pakuchinja kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inowedzera stock ye2012 uye 2013 MacBook Pro mabhatiri